5 aghụghọ iji bulie nchekwa na obere kichin | Bezzia
Maria onyekwere | 08/06/2021 12:00 | Nri
Obere kichin na-ama aka. Kedu otu esi eme ohere maka ihe niile anyị chọrọ na obere oghere? Imnwetacha ihe nchekwa bụ ihe dị mkpa iji mee ka kichin rụọ ọrụ ma sie nri ka bụ ọrụ na-atọ anyị ụtọ. Ma olee otu esi eme ya?
Na Bezzia anyị anakọtara usoro aghụghọ iji jirichaa nchekwa n'ime obere kichin. Ma ị chọghị kichin oghere iji nwee ike mejuputa ha; na okike ị nwekwara ike mejuputa ha na kichin edozilarị. Rịba ama!
Tupu ịmalite itinye usoro aghụghọ ndị anyị na-akọrọ gị, anyị chọrọ ka ị doo anya na ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ihe karịa ebe nchekwa, ị gaghị eme ka kichin gị dị mma. - butere ụzọ, tufuo ihe ị na-ejighị na oge niile na ihe niile ga-adị mfe karị.
1 Jiri mgbidi niile mee ihe
2 Belata nke ngwa
3 Nzọ na tebụl wepụ
4 Wepụ saịtị maka ihe ọ bụla
5 Wụnye ọnụ ụzọ na-amị amị
Jiri mgbidi niile mee ihe
Wall nwere mgbidi n’efu na kichin gị? Wunye ihe ngwọta ala-ụlọ nke ahụ ga - enyere gị aka ịchekwa ebe nchekwa. Gwakọta ihe ngwọta nchekwa emechiri emechi na ndị ọzọ mepere emepe nke na-enye gị ohere ịnwe ihe ị na-eji kwa ụbọchị. Ihe ngwọta ndị a ekwesịghị ịdị ezigbo omimi; 20 centimeters ezuola ịhazi ite iko na mkpo, ọka, mkpụrụ na ngwa nri, yana ịchekwa obere ngwa, ọkwá ma ọ bụ iko.
I nwekwara ike iji ohere kichin nweta ohere ọzọ iji hazie ngwa nri na arịa dị iche iche. A ihe ntụchi ma ọ bụ shelf dị warara ga-enye gị ohere n’etiti ebe a na-arụ ọrụ na oche ndị dị n’elu maka ọtụtụ ihe karịa ka ị chere.
Belata nke ngwa
Ngwa na-ewe akụkụ buru ibu na kichin anyị. Otú ọ dị, nke a ekwesịghị ịdị ka nke a; anyị nwere ike imeghari nha nke ngwa anyị na etu esi esi nri anyị. Ibute ụzọ bụ ihe dị mkpa iji họrọ nke akụrụngwa eletriki anyị nwere ike ime na enweghị ma ọ bụ nke anyị nwere ike belata nha.
Igwe efere efere dị gị mkpa? Ikekwe ị nwere ike belata nha ya iji gbanye ya mgbe niile. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị don'tụbiga nri ọkụ, o nwere ike ọ gaghị adị mkpa ka esi nri ebe ị na-ere ọkụ anọ. I nwedịrị ike ịtụgharị uche na-enweghị oven ma ọ bụ microwave na ịhọrọ oven microwave, a ngwa oru na arụ ọrụ okpukpu abụọ. Mgbanwe ndị a na ndị ọzọ dị ka mbenata nju nju oyi ga-enye gị ohere ịnwekwu ohere ịchekwa ihe.
Nzọ na tebụl wepụ
Kedu otu tebụl dọpụtapụtara na-enyere anyị aka ịchekwa nchekwa na kichin? Ọtụtụ mgbe mgbe anyị na-enye kichin nri, anyị na-eme ya site na idobe otu mgbidi idobe tebụl. Tebụl na obere kichin na-abụkarị mpịachi. Otú ọ dị, taa anyị ekwesịghị nyefee mgbidi nke kaboodu itinye tebụl.
Tebụl na-adọrọ adọrọ bụ ihe ọzọ na tebụl mpịachi na obere kichin. A na-etinye ha n'ime oche nri kichin dị ka a ga-asị na ọ bụ otu Tetris. N'ụzọ dị otú a, ebe nchekwa ọ dị mkpa iji mee na-enweghị obere.
Wepụ saịtị maka ihe ọ bụla
Wayzọ ọzọ iji bulie ohere nchekwa bụ igbunye oghere maka ihe ọ bụla. Nanị n'ụzọ a ka ị nwere ike ebuli oche nke ọ bụla ma ọ bụ ndị na-ese ihe iji nweta ọtụtụ ihe dị ka o kwere mee. Nwere ike nweta nke a site na iji ojiji nke mbughari, ndị na-ekewapụ ...
Tụọ nkebe ọ bụla nke ọma, ihe ịchọrọ ịchekwa na ya ma chọọ ngwọta kwesịrị ekwesị iji bulie ya. Taa enwere ọtụtụ echekwa ụlọ nzukọ n’ime ya ka ị ga-ahụ ihe niile ị chọrọ. Nke ukwuu nke na ị ga-ezere ị na-agba ara ka ị ghara imefu ego.
Wụnye ọnụ ụzọ na-amị amị
Ọnụ ụzọ na-emegharị na-edozi ọtụtụ nsogbu na obere oghere. Ọ bụghị naanị na ha na-akwalite mmegharị na ndị a, mana ha na-enye gị ohere itinye oche ebe a ga-eji ọnụ ụzọ eme ihe agaghị enwe ike ịme ya. Lee pantiri nke dị n’elu! Ga-achọ 25 centimeters miri iji mepụta nha anya yana sistemu modular dị mfe ma dịkwa ọnụ ala yana ọnụ ụzọ eji abanye.
Youdị ụdị echiche ndị a na-amasị gị iji melite arụmọrụ nke kichin? Ha dịịrị gị uru?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » 5 aghụghọ iji bulie nchekwa na obere kichin
Otu esi eme ka anya ndu ndu